हाम्रो अघिल्लो पोस्ट मा हामी सनकी मामला इन्जिन तेल ढाकिएको, यो जाँच गर्न र के हेर्न कसरी. यो पोस्ट मा हामी प्रसारण तरल पदार्थ जाँच आवरण हुनेछ र खोज्न के.
इन्जिन तेल अर्को, प्रसारण तेल शायद अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तरल पदार्थ छ. तिनीहरूलाई सही सञ्चालन र ठीक र प्रसारण पारी र लामो जीवन सुनिश्चित गर्न लागि स्वचालित प्रसारण क्रम मा उचित स्तर छ लागि यो अत्यावश्यक छ.
हामी के पहिलो कुरा अगाडी जान र प्रसारण को तरल पदार्थ स्तर जाँच छ. यो स्नान छडी पत्ता लगाउनुहोस् र वाहन चलिरहेको बिना यो बाहिर पुल. कहिलेकाहीं तरल पदार्थ जाँच गर्न कसरी मा स्नान छडी निर्देशन छन्. तपाईं उपलब्ध एक छ भने पनि मालिकको मार्गदर्शन मा हेर्न, निर्देशनहरू तरल पदार्थ अन्तर्गत स्थित गर्नुपर्छ. सबैभन्दा निर्माताहरु वाहन न्यानो हुनुपर्छ भन्ने संकेत, इन्जिन चलिरहेको र तटस्थ मा. यो dipstick बन्द पोछो र यो पुन सम्मिलित र फेरि बाहिर पुल र तरल पदार्थ सिफारिश सीमा छ कि जाँच. पनि तरल पदार्थ गंध, यो एक जलेको गन्ध छैन गर्नुपर्छ. सबैभन्दा प्रसारण पनि तिनीहरूलाई एक लाल रङ्ग र सम्पूर्ण कालो हुन हुँदैन (यो लाभ वाहन छ कसरी उच्च निर्भर).
केही नयाँ गाडी संग, यो प्रसारण एक सम्पूर्ण छाप एकाइ छ, तपाईं थप्न न पनि तरल पदार्थ जाँच गर्न सक्दैन भनेर अर्थ. तपाईं समान जाँच गर्न सक्छन् भनेर यी गाडी र गाडी संग, हामी तपाईं अगाडी जान र वाहन ड्राइव सुझाव. वाहन चिसो छ भने, तपाईं ड्राइभिङ्ग बेला, वाहन द्वितीय सजिलै स्थानांतरण छ भने याद. हामी यो दुई तरिकामा गर्न रुचि. एक, एक पूर्ण रोक देखि, बिस्तारै सामान्य ड्राइभिङ्ग अवस्था संग रूपमा यो अधिक भल्ब दिने. दोस्रो, एक पूर्ण रोक देखि कठिन र छिटो बन्द लिएर. यसरी परीक्षण गर्दा rpms साधारण इन्जिन परिवर्तन पहिले एक सानो उच्च जानेछु. तपाईं कार मा वाहन को मालिक छ भने उनीहरूले एक हृदयघात छैन हुनेछ त तिनीहरूलाई तपाईं हात अघि गरिरहेका छन् के थाहा दिनु चाहनुहुन्छ र तपाईं आफ्नो कार माथि च्यात्नु गर्न खोजिरहेका छन् लाग्छ सक्छ. एक प्रसारण चिसो छ जब यसलाई काम र द्वितीय सजिलै बदली छैन जब एक समय छ. यो rpms भने हेर्न जाँच (प्रति मिनेट इन्जिन Revolutions) उच्च चलिरहेको छन् र इन्जिन र प्रसारण परिवर्तन पहिले कडा काम छ. वाहन राम्रो र न्यानो छ पनि जब, कसरी वाहन स्थानांतरण छ फेरि सूचना लिन.
प्रसारण तरल पदार्थ परिवर्तन इन्जिन तेल परिवर्तन जस्तै नियमित रूपमा गरेको गरेको कुरा छैन. तथापि, यो निर्माताहरु सिफारिसहरू अनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ. यो जानकारी मालिकको मार्गदर्शन मा सूचीबद्ध गर्नुपर्छ, र आषा विक्रेता एक छ. हामी भरण ट्यूब यसलाई बाहिर गरेर प्रसारण तरल पदार्थ परिवर्तन भन्ने प्रणाली छैन ठूलो प्रशंसक छन्. केही तेल परिवर्तन ठाउँमा यो, र हामी एक वाहन छ जब यो गरेको भएको कहाँ देखेको छु 100,000 यसलाई किलोमिटर राम्रो भन्दा बढी नोक्सानी गरेको छ. यस गरेका भएको पछि वाहन ठीक पारी छैन. सधैं तिनीहरूले प्रसारण Serviced थियो भने मालिक सोध्न र कसरी यो Serviced थियो र कहाँ. हामी तरल पदार्थ अगाडी जान र प्रसारण पैन ड्रप र फिल्टर परिवर्तन परिवर्तन गर्न छ भने सिफारिस.
Lastly, तपाईं सधैं तपाईं खरीद गर्नु अघि एक पटक भन्दा यो एक दिन एक प्रमाणित मिस्त्री गर्न खरीद विचार गर्दै छन् कि एक वाहन लिन चाहनुहुन्छ. तपाईं पनि एक प्राप्त गर्नुपर्छ वाहन अवस्था रिपोर्ट वाहन को बिक्रेता देखि उपलब्ध सेवा रेकर्ड छ भने हेर्न. गाडी र बिक्रेता मा Serviced हुँदा तिनीहरूले सामान्यतया प्रमुख वाहन अवस्था रिपोर्ट कम्पनीहरु यो रिपोर्ट र वाहन गर्न गरेको सबै लिपिबद्ध सेवाहरूको रेकर्ड राख्न मदत गर्छ.
Tags: जाँच प्रसारण, जाँच प्रसारण तरल पदार्थ, वाहन अवस्था रिपोर्ट